नवाैं राष्ट्रिय खेलकुद ताेकेकाे मितीमा नै हुने संम्भावना कतिकाे छ ? | | Neplays.com
नवाैं राष्ट्रिय खेलकुद ताेकेकाे मितीमा नै हुने संम्भावना कतिकाे छ ?
By Neplays	 Last updated May 1, 2019
भर्खरै मात्र नेपालगंजमा आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको समापन हुँदा गण्डकी प्रदेशले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने जिम्मेबारी पाएकाे छ । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाईने खेलका केही पुर्वाधार बन्न बाँकी रहेपनि प्रतियोगिता तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालिएको छ ।
पोखरा रंगशालामा यतिबेला फुटबल मैदान र आर्चरीको भेन्यु निर्माण भईरहेको छ । फुटबल मैदान बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया टुग्ंयाई जग खन्ने तयारी छ । १ अर्ब २७ करोडको योजनालाई ६ महिना भित्र पुरा गर्ने जिम्मेवारी भारतीय ग्रेट स्पोर्टस र एम.ए कन्ट्रक्सन जवलाखेल ललितपुर (जे.भी)ले लिएका छन् । आर्चरीको लागि पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत २ करोड ४० लाख रुपैयाँको बजेटबाट काम पुरा गरिएको छ । केवल मैदानलाई ग्रिनरी बनाउने काम बाँकी छ ।
यस्तै मार्शल आर्ट खेलको लागि १६ करोड रुपैयाँको बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल तयार भईसकेको छ । आन्तरिक सिट, साउण्ड सिष्टम र पाकेटिङको काम टुग्याउनुपर्ने छ । पोखरा रंगशालाभित्रै अर्को पुर्वाधार हो टेनिस कोर्ट अहिले ५ वटा क्ले कोर्ट छन् । जुन कोर्टमा भर्खरै मात्र अन्तराष्ट्रिय टेनिस महासंघले दिएको यु–१४ का खेलहरु संपन्न भईसकेको छ ।
भलिबल, स्क्वायस, लगायतका अन्य खेलका पुर्वाधार समेत बनेका छन । यहाँको क्रिकेट मैदानमा पोखरा प्रिमियर लिग भब्य रुपमा सम्पन्न भैसकेको छ । हालै मात्र थपिएको प्याराग्लाईडिकका लागी उपयुक्त स्थान नै पोखरा हो । यिनै पुर्वाधारका कारण पनि पोखराले नवौँ खेलकुद प्रतियोगिता सहज रुपमा संपन्न गर्नेछ ।
रंगशाला भित्रै व्याडमिन्टन कभर्ड हल निर्माण भईरहेको छ । स्विमिङ र सुटिङका लागी पुर्वाधार भने बनाउनु पर्नेछ । यसका लागी पहल थालिएको छ । प्रतियोगिता अवधिभर खेलाडी, पदाधिकारी लगायत सहभागीलाई बस्न, खान र घुमफिरका लागी उत्कृष्ठ ब्यवस्थापन गरिने खेल पदाधिकारी बताउँछन ।
पोखरामा नै सबै पैतियोगिता गराउन सकिने भएपनि मार्सल आर्टका केही प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा गराउने योजना बनाईएको छ । डिसेम्बरमा नेपालले आयोजना गर्ने साग गेमका केही खेल पोखरामा पनि खेलाईदै छ । त्यस्का लागी गरिएको पुर्वाधार निर्माणले पनि नऔँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई सहज हुनेछ ।
राखेपकाे १३ बुँदे प्रतिबद्धता ‘साग समयमै गर्ने’